Akụkọ - RED100 Lighting na -ewebata Bulb Solution Platform Wireless Platform- Bulb Beacon maka Ngwa obibi.
RED100 Lighting na-ewebata Ngwọta Ngwọta Igwe Ọdụdọ Ọhụrụ- Mgbaaka mgbaaka maka ngwa obibi.
Na July 6nke, Ọkụ ọkụ RED100-onye na-emepụta ọkụ na-ebute ọkụ ọkụ zuru ụwa ọnụ nke dabere na China, kwupụtara na ọ wepụtara ụzọ dị ọnụ ala, dị mfe ijikọ smart bulb solution-Beacon Smart Bulb, mgbe Tuya smart ka bidoro ikpo ọkụ mgbede Satọdee gara aga na Julaị 3rd.
N'ime afọ ndị gara aga, a na -ejikọkwu ọtụtụ ngwaọrụ ọkụ na teknụzụ ikuku dị iche iche. N'ime ụlọ ọrụ ebe a na-ebelata ọnụ ahịa nchekwa data ngwa ngwa ma a na-eme ọkọlọtọ ikuku, okwu ndị ọzọ dịka Zigbee amalitela ịnụ na mgbakwunye Wi-Fi na Bluetooth ama ama. Ma ugbu a, ikpo okwu ọhụrụ, Beacon, esonyerela ezinụlọ ikuku.
Bluetooth gbadoro ụkwụ na njikọ njikọ aka ma ọ bụ netwọkụ nke ọnụ ọnụ ole na ole. A na-etinyekarị ya na desktọpụ, laptọọpụ, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ngwaọrụ mmepụta ọdịyo, enweghị aka, egwuregwu ma ọ bụ ngwaọrụ akpaaka ụlọ na ọbụna ihe egwuregwu, teknụzụ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Wi-Fi na-enye ohere njikọ Ịntanetị nke ngwaọrụ dị iche iche, ọ na-enyekwa ohere ka ngwaọrụ jikọọ n'okpuru otu netwọk. Ọ nwere ike bụrụ nke a na -ejikarị, yabụ anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwaọrụ ejikọrọ taa.
Zigbee chọrọ ka ejiri akwa akwa ma ọ bụ ngwaọrụ hub, nke bụ maka ojiji ụlọ, ihe mmetụta, nnakọta data nke na -achọghị oke ọsọ, wdg.
Mgbama, dị ka onye otu ọhụrụ nke njikọ njikọ, ga -ewetara ndị ọrụ ahụmịhe ngwaahịa dị iche. Mgbama bụ ngwaọrụ na -eziga mgbama mgbasa ozi akọwapụtara na gburugburu n'ime oke oke. Mgbama na-emetụta ma na-akwado ọtụtụ ọnọdụ, site na njikwa ọkụ ọkụ ime ụlọ/n'èzí na akụrụngwa eletriki, na ntuziaka ịzụ ahịa n'ime ụlọ ahịa, nyocha ndị mmadụ na-asọba, nsuso ihe, ịchọ ụgbọ ala n'ime ụlọ, wdg.
Ngwọta ọkụ mgba ọkụ dabere na mgbasa ozi Bluetooth ma mee ka njikọta ngwa ngwa yana nchekwa. Site na ngwọta ndị a, ọkụ smart na-adị mfe ịzụlite, na-eri ọnụ ala, na-anaghị achọ akụrụngwa Wi-Fi dị mkpa. Ha na-akwado ọtụtụ ụzọ njikwa na ụdị njikwa, gụnyere njikwa dabere na ngwa mkpanaka na-enweghị ọnụ ụzọ, njikwa site na ọnụ ụzọ, njikwa site na njikwa anya Beacon, yana njikwa akpaaka site na njikọ na sensọ kọntaktị, ihe mmetụta PIR, na ngwaọrụ ndị ọzọ.Ngwọta ndị a dabara na ndapụta ọkụ ebe ejiri ọtụtụ ngwaọrụ ọkụ (dị ka chandeliers na ọkụ ọkụ) n'otu ebe.
Kedu uru nke Beacon?
Nke mbu, site na njikwa otu nkwado, ndị ọrụ nwere ike tinye oriọna LED dị iche iche na otu maka njikwa na njikwa otu. Usoro otu na -agbanwe agbanwe, otu oriọna nwere ike ịbụ nke otu 8 n'otu oge, ezinụlọ niile nwere ike nwee ihe ruru otu 254.
Nke abuo, Beacon na -enye ahụmịhe nkesa netwọkụ ka mma. Enwere ike mezue nkesa netwọkụ na sekọnd 3-5, na-enweghị mkpa ndị na-anya ụgbọ elu na ọnụ ụzọ. Onye ọrụ nwere ike nweta ahụmịhe ndị ahụ nke ọma naanị site na smart ekwentị maka njikwa ngwaọrụ.
Nke atọ, mgbama na -amata nchapụta/ụcha agba/mgbanwe ọkụ ọkụ agba, onyonyo ọkụ, ụda egwu, ngụda, njikwa beacon Bluetooth, njikwa otu, oge mpaghara na ọrụ ndị ọzọ, na -akwalite ahụmịhe ndụ ndị nwere ọgụgụ isi.
Ebe ị ga -enweta bọlbụ mgbama?
RED100, dị ka onye atụmatụ atụmatụ na Tuya Smart, etolitela usoro 50 nke ngwaahịa ejikọtara site na iji ikuku ikuku dị iche iche, gụnyere Wi-Fi Combo, BLE Mesh, BLE, na Zigbee. Ngwaahịa ọkụ ha eregoro North America, Europe, South America, Southeast Asia na mpaghara ndị ọzọ.
Dịka onye mmekọ mbụ nke Tuya Beacon smart solution maka ọkụ, RED100 na -enye otu mbụ nke Beacon Bulb n'ụwa, a ga -ebidokwa ya taa. Mgbama mgbama enweela ihe ga -ekwe omume n'oge gara aga na nnwale ntụkwasị obi ogologo ndụ.
Ọkụ ọkụ mgbama dị njikere maka Mmepụta na Days na nlele ghe oghe maka ịtụ. Ndị ahịa ọ bụla nwere mmasị na bọlbụ mgbama a, pls. kpọtụrụ onye na -ere ahịa mpaghara mpaghara site na Red 100, a ga -aza arịrịọ nlele ọ bụla n'ime izu 1. Biko ziga email na info@red100.com.cn ma ọ bụ kpọọ 86-512- 53119122.
Igwe ọkụ ọkụ RED100 Weebụsaịtị, Njikọ, Facebook, Twitter
* Isiokwu a na -ehota Tuya smart “N'okpuru ọgba aghara ụlọ ọrụ na -emekarị" ụkọ Chip, ihe ngwọta na -eme ka ọkụ ọkụ dị ọnụ ala!